Archive du 20190620
Fampidinana ny vidin-tsolika Nivoaka sempotra ny fanjakana
Nivoaka ihany ny fehin-kevitra taorian’ny fifampidinihan’ny filoha Andry Rajoelina sy ny mpiara-miasa aminy ary ireo mpandraharaha ny solika.
Fitondrana ankehitriny « Tsy tokony hiala bala intsony. »
Fanjakana IRD na Mapar no mitondra izao, hoy ny mpahay lalàna Willy Razafinjatovo na Olala.
Ampamoaka nahakasika ny IEM Hogadraina i Mahery Lanto Manandafy ?
Anio amin’ny 8 ora maraina eny amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Anosy, efitrano fahatelo ny fitsarana ny raharaha nitorian-dRabaonarijaona Holijaona an’i Mahery Lanto Manandafy (MLM).
Fiandrianam-pirenena “Ny politika no manimba azy”, hoy i Maka Alphonse
“Hankalaza ny fiverenan`ny fahaleovantena isika, ny fiandrianam-pirenena, ny maha firenena ny firenena iray.
Toetr’andro Hidina 13°C ny maripana ho an’Antanarivo
Hiatrika fikorontanana ny lanitra amin`ity herinandro ity ary hisy faritra hahazo rotsak`orana toy ny Atsimo Atsinanana ary hahazo vahana any Avaratra avy eo.
Lalàna mifehy ny serasera Hiroso amin`ny fanavaozana
Manomboka ny fakan-kevitra isam-paritra ho an’ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny serasera ka natomboka ny talata 18 jona 2019
Neymar Junior Sady naratra indray no voasazin’ny UEFA
Naratra indray tamin’ny fihaonana ara-pirahalahiana nikatrohan’i Brésil sy Qatar tamin’ny 6 jona teo i Neymar ka tsy afaka niatrika ny Copa America 2019 tontosaina any amin-dry zareo ankehitriny.
Drepanocytose – aretin’ny ra Ireo zaza latsaky ny 5 taona no tena lasibatra
Ny 10 %-n’ny Malagasy amin’izao no fantatra fa lasibatry ny aretina faingosela na ny “drepanocytose”.
BE VAOVAO LAMESAN’NY PAPA
Any amin’ny paroasin’ny fiangonana katolika akaiky no misoratra anarana ireo rehetra hanatrika ny Sorona masina hotarihin’ny
Kolikoly sy fanaovana tsindry bokotra Hotsaraina afaka 1 volana i Nicolas Sarkozy
Neken’ny Fitsarana Frantsay avy hatrany ny fandefasana an’i Nicolas Sarkozy hotsaraina eny amin’ny Tribonaly.
Fifidianana filoham-pirenena 2020 Mahatoky tena tanteraka i Donald Trump
Nanambara tamin`ny fomba ofisialy amin`ny maha kandidà azy amin`ny fifidianana filoham-pirenena amin`ny volana novambra 2020 ny filoha am-perinasa Donald Trump.
Mpifindra monina sy mpitsoa-ponenana Etiopia sy Venezoela no mitazona ny lohalaharana
Nahatratra 70,8 tapitrisa ny isan`ny olona nifindra monina maneran-tany vokatry ny ady sy fanenjehana samihafa araka ny tarehimarika nivoaka tamin`ny taona 2018 avy amin`ny Firenena Mikambana (ONU).
Hong Kong “Tsia” roa tapitrisa ho an`i Sina
Naneho fialan-tsiny ampahibemaso i Carrie Lam, lehiben`ny Andrimpanjakana mpanatanteraka any Hong-Kong manoloana ny krizy
Mali Mitovy ny herisetra tany Sobane sy Koro
Nambaran` ny lehiben` ny fampanoavana ny asa fampihorohorona tany mali, Atoa Boubacar Sidiki Samake,
“Auto-tamponneuse” nampidi-doza Zaza 5 taona main’ny herinaratra
Ny takarivan’ny alahady lasa teo, tovolahy kely iray vao 5 taona monja niaraka nilalao tamin’ny zokiny no tra-doza teo am-pilalaovana “auto-tamponneuse” eo anoloan’ny lapan’ny tanàna Toamasina. Nihinjitra ny vatany, araka ny angom-baovao azo.
Fiantsonan’ny taksibrosy Andohatapenaka Nadoboka eny Tsiafahy ilay mpanendaka mpanindrona antsy
Taorian’ny fampiakarana fampanoavana ny alakamisy heriny, naiditra am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy ny mpanao sintomahery iray mampiasa antsy lava hampihorohoroana ireo endahiny.
Antsakaviro sy Ankorahotra Mpanendaka enina no tratra teo am-perinasa
Tovolahy miisa enina no voasambotry ny sampandraharahan’ny polisy misahana ny ady heloka bevava sakelika fahaefatra sy ny polisin’ny boriborintany fahatelo teny amin’ny faritra Antsakaviro sy Ankorahotra.
Diplaoma hosoka sy vola sandoka Olona 3 naiditra am-ponja
Araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena mikasika ilay vola sandoka tratra tamin'ny 12 jona tao Ankadilalana izay nahasamborana olona 5 dia 3 no voatazona any am-ponja, nahazo famotsorana vonjimaika kosa ny roa.